Real Madrid Oo Ronaldo Uu Hogaaminayo Oo Cashar Ugu Dhigtay Camp Nou Kooxda Barcelona. - jornalizem
Real Madrid Oo Ronaldo Uu Hogaaminayo Oo Cashar Ugu Dhigtay Camp Nou Kooxda Barcelona.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaaminayo xiddigooda Cristiano Ronaldo ayaa cashar lama ilaawaan ah ugu dhigtay kooxda Barcelona garoonkeeda Camp Nou ka dib markii ay ku dubteen 3-1 lugta labaad ee semi-finalka Copa del Rey iyagoo finalka ugu gudbay wadar ahaan labada lug 4-2.
Kulankaan ayaa waxaa goob joog ka ahaa tababaraha Man United Sir Alex Ferguson iyo caawiyihiin Phelan oo daawaanayay Real Madrid oo ay wada ciyaarayaan Champions League, halka martida sharafta kale ee ka soo qeyb gashay ay ka mid ahaayeen Juliano Belleti, Christian Vieri & Andriy Shevchenko.
Fursadii ugu horeysay ee ciyaartana waxaa heshay Barcelona daqiiqadii 2aad markii Pedro uu kubad xerada ganaaxa dhexdeeda ugu dhiibay Messi kaasoo koontaroolay balse kubada hormariyay goolka halkii uu shabaqa abaari lahaa.
Barcelona ayaa ciyaarta ku bilaabatay si dardar xoogan ah iyagoo qeybihii hore cadaadis saarayay Real Madrid, laakiin taasi ayaa isbedeshay markii kubad loo dhex bixiyay Ronaldo uu diilinta ganaaxa la soo galay isagoo kubad hal iyo hal ah ku helay Pique kaasoo xamili waayay Ronaldo islamarkaana diilinta ganaaxa dhexdeeda ku dhigay dhulka.
Garsooraha ayaana tilmaamay daqiiqadii 12aad rigoore, iyadoo uu rigoorada u soo joogsaday Cristiano Ronaldo kaasoo shabaqa si habsami leh ugu hubsaday islamarkaana dabamariyay goolhaye Pinto.
Ronaldo ayaana ah ciyaaryahankii ugu horeyay ee isagoo marti ah lix kulan oo isku xigta gool ka dhaliya kulamada Clasico.
Barcelona ayaa kubada iska heysatay inta badan halka Madrid ay halis ku aheyd weerarada kubadaha counter attack, waxaana Blaugrana ay labo jeer ku dooday rigoore iyagoo ku dooday in Fabregas iyo Pedro qalad lagula galay diilinta ganaaxa dhexdeeda laakiin garsooraha ayaan dheg u dhigin.
Daqiiqadii 39aad ayaa Messi uu ku sigay goolka laad xor ah oo loo dhigay albaabka hore ee diilinta ganaaxa, taasoo si ciriiri ah ku ag martay goolka, iyadoo daqiiqad ka dib Sergio Ramos uu isna lugta la waayay oo ka soo daahay kubada ku taabasho aheyd ka dib markii uu helay karoos fiican.
Waxaana qeybtii hore oo ciyaar xamaasad laheyd la ciyaaray lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka ku heysay kooxda Real Madrid.
Shan daqiiqo markii ay socotay qeybta labaad, Xabi Alonso ayaa kubad u dhex bixiyay Fabio Coentrao kaasoo dhanka bidix ka soo galay xerada ganaaxa, laakiin darbadiisa waxaa si sahlan kaga qabtay goolhaye Pinto.
Daqiiqadii ku xigtay Barcelona ayaa u dhawaatay inay shabaqa soo taabato, iyagoo kubado badan goolka ku celceliyay, ka dib waxaa fursad fiican helay Busquets oo kubad la helay goolka laakiin waxaa ka beeniyay goolhaye Lopez kubadii soo laabatay waxaa goolka dushiisa marsiiyay Fabregas.
Daqiiqadii 57aad ayaana Real Madrid ay hogaanka dheereysatay, ka dib markii Sami Khedria uu kubad dheer u dhigay Di Maria kaasoo orod ku maquuniyay daafaca Barca Carles Puyol ka hor inta uusan kubad la damcin goolka waxaa lugta ku sii taabtay goolhaye Pinto iyadoo ay si nadiif ah ugu tagtay Ronaldo oo dhanka midig ka soo galay xerada ganaaxa, inta uu xabad ku koontaroolay ayuu shabaqa si habsami leh u cusjiyay.